Spiro michina Apicmo biochemical cdmo vatori
Products > Spiro compounds
Ndezvipi Spiro Makemikari?
A spiro compound (inonzi spirane) inonzi organic, makemikari akabatanidzwa ane shinje yakakomberedzwa yezvindori zvinopfuura rimwe. Pano, zvindori zvakabatanidzwa pamwechete neatomu imwe inowanzoonekwa kune vose. Ichokwadi, zita rokuti "spiro" rakatorwa kubva muchiLatini izwi spīra, zvinoreva koiri kana kuti kukanganisa.
Rudzi rwekutanga rwe spiro compounds bicyclic, rune maitiro maviri. (bi zvinoreva zviviri). Kana kuti, inogona kuva nechikamu chebicyclic iyo inenge iri chikamu chiduku cheguru rakakura. Hazvinei kuti chii chikamu ichocho, zvindori zvose zvakabatana kuburikidza nechimwe cheatomu inotsanangura inowirirana kune vose.
Spirane dzimwe nguva ingangove yakakwana carbocyclic kana heterocyclic zvakare. Carbocyclic zvinoreva kuti makemikari acho ose carbon, asi heterocyclic zvinoreva kuti makemikari ane imwe kana kupfuura imwe yemaatoni eatomu.
Mishonga yeMweya ine runyora rwezvinodhaka zvakasiyana-siyana pasi pawo. Mishonga iyi yakanyorwa pasi apa -
Mhando dzakasiyana dzeSpiro Structure
Sezvinoenderana nechende yavo yakagadzirwa, spirane inowedzera kugoverwa mune mamwe maitiro akasiyana-siyana.
Spiro michina iri kushandiswa munyika yose. Mamwe emakemikari aya ari kushandiswa zvakanyanya semashandisirwo emhando yekudzidza mumunda webiomedical. Izvi zvinoshandiswa segadziriro yekubatsira kwekurapa, nekushanda sezvigadziro.
Tsanangudzo Yokudzidza Kwezvinodhaka Pasi peSpiro Zvikamu
Nhamba yekubatanidzwa kwechirwere ichi DB00490. Buspirone ndeyomudziyo weAzaspirodecanedione, iyo serotonin receptor agonist uye anxiolytic agent. Uyewo, mishonga inobudirira iyo inogona kuenzaniswa neyey diazepam.
Chirwere chacho chinowanzoshandiswa pakurapa kuora mwoyo uye kushungurudzika kwepfungwa.
Nhamba yekubatanidzwa kwechirwere ichi DB04842. Chimiro chema-molecule maduku, ichi chinodhaka chinonzi antipsychotic agent inogara kwenguva refu uye inogona kuiswa. Fluspirilene inoshandiswa mukurapa chirwere chisingaperi chine schizophrenia.
Nhamba yekubatanidzwa kwechirwere ichi DB00693. Mukuwedzera kune kushandiswa mukushandisa zvinodhaka uye zvipfeko zvezvinangwa zvekunze, ichi chinodhaka chinoshandiswawo sekubatsira kwekugadzirisa marwadzo uye kukakuvara kwechinangwa chinotyisa. Icho chinyorwa chemashizha-chitubu chegasi kana iri mufirimu chaiwo. Asi, iyo inogona kuoneka yakajeka yezvakakukira mumasikirini e-alkali-e-seque aqueous humor.
Nhamba yekubatanidzwa kweiyi ichi chiremba DB13911. Phloxine B kana Phloxine iri muvara wekuwedzera. Inoshandiswa muvaraidza mukuzarura mahwendefa (meno), uye sechinhu chakasara chekubatsira kuwedzera ruvara kune zvigadzirwa. Mune imwe yekare, mahwendefa anobatsira varwere vachifungidzira nzvimbo dzinowanikwa zvakanyanya kufungidzirwa.
Nhamba yekubatanidzwa kwechirwere ichi DB12030. Iko korokisi kaduku kazhinji inowanzoshandiswa mumisungo yezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Kuongororwa kweHepatitis, Viral, Human, Nonalcoholic Steatohepatitis, Hepatic Cirrhosis, Pharmacokinetics uye Isina Dorokilic Fatty Chiropa Zvirwere zviri minda.
Kuratidza zvose 6 zvawanikwa